ပိုင်ရှင်မပါဘဲ ကိုယ်တိုင်ထွန်နေတဲ့ နွားလိမ္မာတစ်ရှဉ်း(ရုပ်သံ) – Alanzayar
ပိုင်ရှင်မပါဘဲ ကိုယ်တိုင်ထွန်နေတဲ့ နွားလိမ္မာတစ်ရှဉ်း(ရုပ်သံ)
ကြည့်စမ်းပါအုံးဗျာ ဖေ့သားကြီးတို့လိမ္မာချက်က လူတောင်လိုက်စရာမလိုဘူးနော်။ ညာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာတွေထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော် ဒါကသက်ရှိအမှန်အကန်။
သူတို့ဘာသာထွန်နေကြတာ ဒီလိုနွားတစ်ရှဉ်းလောက် မလိုချင်ကြဘူးလား။ သူတို့ကထွန် ကိုယ်က ဖုန်းလေးနဲ့ ဖေ့ဘုတ်ပွတ်နေရုံဘဲ။ထွန်သွားကြတာများ ထွန်ကြောင်းကိုဖြောင့်လို့…လူပါတာကမှ လွဲချင်လွဲအုံးမယ်၊ သူတို့ကတော့မလွဲဘူး။
တိရိစ္ဆာန်ဆိုပေမယ့် သူတို့အသိညာဏ်က ကိုယ့်တာဝန်ကိုသိတယ် မခိုမကပ်ကျေပွန်အောင်ထမ်းတယ်၊ တစ်ချို့လူတွေထက်တောင်သာသေးတယ်နော်။
နွားတွေဆိုတာ မြန်မာပြည်တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်တော့ ရဲဘော်ရဲဘက်၊ ကျေးဇူးရှင်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ နွားကောင်းကောင်းလေးများရထားရင် ပျော်လို့မဆုံးတစ်ပြုံးပြုံး၊ သူ့နွားကိုယ့်နွားအပြိုင် ကြွားရသေးတယ်။#ထန်းညက်ခဲနွားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ရှေးဆိုရိုးမှတ်သားစရာလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…
၁။ နွားနီ ကွမ်းသွေး ရိုက်နိင်မှပြေး ။
၂။ နွားပြာနီ တုတ်မွှေး ရိုက်နိင်မှပြေး ။
၃။ နွားပြာ ချိုတုတ် ထမ်းပိုးနှုတ် ။
၄။နွားပြာနီ ရှဉ့်မွှေး ရိုက်နိင်မှပြေး ။
၆။ နွားဝါဖွဲနု သေအောင်ထု။
၈။ နွားဝါ မျက်ကွင်းဖြူ ကြိမ်မကူ။
၉။ နွားဝါဖင်ဖြူ ကြိမ်မကူ ။
၁၀။ နွားညို သံရောင် ကြိမ်မဆောင် ။
၁၂။ မွှေးတိုမွှေးကြမ်း ထမ်းပိုးထမ်း အစွမ်းကောင်းလှပေ ။
၁၃။ ဗွေဆင့်မျက်ခြား အဝယ်မှား အိမ်ကမယား သေလတ္တံ့။
ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် Like and Share လုပ်ခဲ့ပါအုံးနော်….
ပိုငျရှငျမပါဘဲ ကိုယျတိုငျထှနျနတေဲ့ နှားလိမ်မာတဈရှဉျး(ရုပျသံ)
ကွညျ့စမျးပါအုံးဗြာ ဖသေ့ားကွီးတို့လိမ်မာခကျြက လူတောငျလိုကျစရာမလိုဘူးနျော။ ညာဏျရညျတု AI နညျးပညာတှထေညျ့ထားတာမဟုတျဘူးနျော ဒါကသကျရှိအမှနျအကနျ။
သူတို့ဘာသာထှနျနကွေတာ ဒီလိုနှားတဈရှဉျးလောကျ မလိုခငျြကွဘူးလား။ သူတို့ကထှနျ ကိုယျက ဖုနျးလေးနဲ့ ဖဘေု့တျပှတျနရေုံဘဲ။ထှနျသှားကွတာမြား ထှနျကွောငျးကိုဖွောငျ့လို့…လူပါတာကမှ လှဲခငျြလှဲအုံးမယျ၊ သူတို့ကတော့မလှဲဘူး။
တိရိစ်ဆာနျဆိုပမေယျ့ သူတို့အသိညာဏျက ကိုယျ့တာဝနျကိုသိတယျ မခိုမကပျကပြှေနျအောငျထမျးတယျ၊ တဈခြို့လူတှထေကျတောငျသာသေးတယျနျော။
နှားတှဆေိုတာ မွနျမာပွညျတောငျသူလယျသမားတှအေတှကျတော့ ရဲဘျောရဲဘကျ၊ ကြေးဇူးရှငျဆိုလညျးမမှားပါဘူး။ နှားကောငျးကောငျးလေးမြားရထားရငျ ပြျောလို့မဆုံးတဈပွုံးပွုံး၊ သူ့နှားကိုယျ့နှားအပွိုငျ ကွှားရသေးတယျ။#ထနျးညကျခဲနှားအကွောငျးနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ ရှေးဆိုရိုးမှတျသားစရာလေးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ…
၁။ နှားနီ ကှမျးသှေး ရိုကျနိငျမှပွေး ။
၂။ နှားပွာနီ တုတျမှေး ရိုကျနိငျမှပွေး ။
၃။ နှားပွာ ခြိုတုတျ ထမျးပိုးနှုတျ ။
၄။နှားပွာနီ ရှဉျ့မှေး ရိုကျနိငျမှပွေး ။
၆။ နှားဝါဖှဲနု သအေောငျထု။
၈။ နှားဝါ မကျြကှငျးဖွူ ကွိမျမကူ။
၉။ နှားဝါဖငျဖွူ ကွိမျမကူ ။
၁၀။ နှားညို သံရောငျ ကွိမျမဆောငျ ။
၁၂။ မှေးတိုမှေးကွမျး ထမျးပိုးထမျး အစှမျးကောငျးလှပေ ။
၁၃။ ဗှဆေငျ့မကျြခွား အဝယျမှား အိမျကမယား သလေတ်တံ့။
ဗီဒီယိုလေးကိုကွိုကျနှဈသကျတယျဆိုရငျ Like and Share လုပျခဲ့ပါအုံးနျော….
Previous Article ယှနျးယှနျးရယျ ဘယျလိုဖွဈရတာလဲ ဒီလိုဖွဈမယျလုံးဝမထငျခဲ့ဘူး စိတျမကောငျးလိုကျတာ ယှနျးရယျ
Next Article ခြင်တွေကိုပြေးစေတဲ့ ရေနွေးကြမ်းအိုးထဲက လက်ဖက်ခြောက်